जोशी हाइड्रोपावरको आइपीओ आउँदै, क-कसले पाउँछ भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » जोशी हाइड्रोपावरको आइपीओ आउँदै, क-कसले पाउँछ भर्न ?
काठमाडौं - जेठ ८ गतेदेखि जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ । उक्त आइपिओ इलाम जिल्लाका आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको ३ लाख ७१ हजार ४०० कित्ता आइपीओ इलाम नगरपालिका वडा नं १, ३ र ४ का स्थानीयबासीलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।
कम्पनीको आईपीओ छिटोमा जेठ २२ गते र ढिलोमा असार ११ गते बन्द हुने छ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल हो । आयोजना प्रभावितले इलाम जिल्लामा रहेका सिद्धार्थ बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र कन्काई विकास बैंकका शाखाबाट आइपीओका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।